भरतपुरमा रेणुको फराकिलो अग्रता, अघिल्लो पटक मतपत्र च्यातिएको वडामा एमाले विजयी – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:५०
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा हालसम्म १९ वडाको मतगणना गरेर सकिएको छ । अहिले २० र २१ को गणना भइरहेको छ । भरतपुर महानगरमा २९ वडा छन् । १९ वडाको मतगणना सकिँदा मेयरकी उमेदवार माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले ३६ हजार ७९७ मत ल्याउनु भएको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनकोतर्फबाट उमेदवार बनेकी रेणु दाहाल मेयरका अर्का उमेदवार एमालेका विजय सुवेदी भन्दा ७ हजार ९७६ मतान्तरले अगाडि हुनुहुन्छ । सुवेदीले २८ हजार ८२१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । दाहालले लगातार आफ्नो अग्रता बढाउँदै लानुभएको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा मतगणनाका क्रममा मत च्यातिएको वडा नं‍. १९ को अध्यक्षमा एमालेका प्रकाश तामाङ निर्वाचित हुनुभयो।
कांग्रेसको पकड क्षेत्रका रुपमा लिइने यस वडामा तामाङले गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका द्रोणबहादुर गुरुङलाई पराजित गर्नुभयो । वडामा तीन हजार ४८८ मत खसेको थियो ।
पुनः मतदान भएपछि यस वडामा कांग्रेसका कर्णबहादुर गुरुङसँग ३८१ मतान्तरले पराजित भएका प्रकाश तामाङ अहिले गठबन्धनका साझा उम्मेदवारसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर विजयी हुनुभयो। वडा सदस्यहरुमा तीन जना एमाले र एक जना कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् ।
औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि